First ... 16 24 25 26 27 28 36 ... Last
04-01-2012 03:21 PM
တစ်နိုင်ငံလုံးရေတွက်ပြီး တရားဝင်ကြော်ငြာတာကိုတော်တော်သိချင်နေပြီ ... ဘယ်လောက်အပြတ်အသတ်နဲ့ နိုင်သွားတယ်ဆိုတာမျိူး =))
04-01-2012 03:55 PM
- ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲရုံစုစုပေါင်း ၁၉ ၉ ရုံအနက် ၁၅၉ ရုံ ရေတွက်ပြီးရာတွင် NLD က ၆၁.၆၂၁ % နှင့် အသာစီးရနေပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၃၈.၃၇၉ % ရှိနေကြောင်း
- ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၃)တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက မဲအသာစီးဖြင့် ဦးဆောင်နေပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဒုတိယနေရာမှ လိုက်လျက်ရှိသည်။
- ပုသိမ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲရုံပေါင်း ၂၀၂ရုံရှိသည့်အနက် ၉၅ ရုံတွင် မဲရေတွက်ပြီးစီးပြီုဖစ်ရာ NLD က ၇၇ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အသာစီးရနေကြောင်း
(7Days News)
- မြိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ပါတီမှ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိုင်ရရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုလဲမြို့နယ်တွင် အမျုိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဆန်းလှိုင်က ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဌေးနိုင်ကို ဆန္ဒမဲ လေးသောင်းကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိ ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း
နေပြည်တော် မဲဆန္ဒနယ်များ အားလုံး NLD အနိုင်ရရှိ ဟုဆို
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၁ ( 8 : 56 )
အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်ရှိ မဲဆန္ဒနယ် လေးနယ်လုံးတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိ မဲဆန္ဒနယ်မှ NLD ပါတီအား ကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ ဒေါ်စန္ဒာမင်းက The Voice Weekly သို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေ ရဲ့ ရဲရင့်မှုကို အာလုံးကို ပြလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။
11 Media က မြို့နယ် ၄၀ လောက် NLD နိုင်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားသော်လည်း၊ ၄၄ နေရာစလုံး နိုင်ဖို့ရှိနေပါပြီ။
တူရကီရောက်နေတဲ့ ဒေါ် ကလင်တန်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံလို့ စတင်သုံးစွဲပြီ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ၀မ်းသာ ကြောင်း ပြောကြား သွားပါတယ်။
ည ၁၂ ခွဲ ၄၁ နေရာ အနိုင် ရခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း NLD D-Wave Journal
က Facebook တွင် အတည်ပြုကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ကော့မှူးမြို့နယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် -------- ၈၅.၄%
မော်လမြိုင်မြို့နယ် ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် ------------ ၈၀.၅%
ပခုက္ကူမြို့နယ် ဦးပိုက်ကို ------------------------ ၇၈.၀%
လောင်းလုံမြို့နယ် ဦးအောင်စိုး ------------------ ၇၇.၈%
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဒေါ်မေ၀င်းမြင့် MBBS ( RGN )1976 ၇၇.၆%
သနပ်ပင် မြို့နယ် ဦးမြင့်ဦး ---------------------- ၇၆.၆%
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ဒေါက်တာ မျိုးအောင် MBBS(MDY)1977 ၇၅.၂%
မြန်အောင်မြို့နယ် ဦးကျော်မြင့်------------------ ၇၅.၀%
မြိုင်မြို့နယ် ဦးမြင့်အောင် ----------------------- ၇၄.၇%
တောင်ငူ မြို့နယ် ဦးအောင်စိုးမြင့်---------------- ၇၄.၆%
ပုသိမ်မြို့နယ် ဦးဝင်းမြင့် ------------------------ ၇၄.၂%
ထန်းတပင် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်)ဦးစိန်ထွန်း ---- ၇၃.၅%
မကွေးမြို့နယ် ဦးမြင့်သိန်း ---------------------- ၇၂.၆%
ကျွန်းစုမြို့နယ် ဒေါ်တင်တင်ရီ------------------- ၇၀.၁%
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို ----------- ၆၉.၉%
သုံးခွမြို့နယ် ဒေါ်စုစုလွင် MA(Eng)1976 ------- ၆၈.၆%
ရေစကြိုမြို့နယ် ဦးတင်ဌေးအောင် -------------- ၆၈.၁%
ပုလဲမြို့နယ် ဒေါ်ခင်စမ်းလှိုင် --------------------- ၆၇.၇%
လှည်းကူးမြို့နယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း 2nd Year Physics 88 ၆၅.၆%
နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ဦးပေါခင် -------------------- ၆၄.၀%
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ဦးနိုင်ငံလင်း -- ၆၃.၈%
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ဦးကျော်သီဟ ---------------- ၆၁.၄%
နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် ဦးမင်းသူ ----- ၅၉.၁%
ကလောမြို့နယ် ဒေါက်တာဒေါ်သန်းငွေ---------- ၅၉.၀%
နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း ----- ၅၆.၇%
မိထ္ထီလာမြို့နယ် ဦးဝင်းထိန် --------------------- ၅၆.၁%
နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဦးဖြိုးဇေယျာသော်- ၅၅.၂%
မအူပင် မြို့နယ် ဦးစိန်ဝင်း ----------------------- ၅၁.၆%
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ( ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း B.A. History 1991)
မဟာအောင်မြေ ( ဦးအုန်းကြိုင် )
တံတားဦး ( ဒေါ်ခင်သန္တာ )
ကျောက်ပန်းတောင်း ( ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် )
စစ်ကိုင်း ( ဦးခင်မောင်သိန်း )
လက်ပံတန်း ( ဦးကျော်မင်း )
မြောင်းမြ ( ဦးမန်းဂျော်နီ )
ဝါးခယ်မ ( ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း )
၁ ) မကွေး မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၄ (တောင်တွင်းကြီး) ဦးအောင်ကြည်ညွှန့် ၆၅.၆%
၂ ) ပဲခူး မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၇ ( ဦး မင်းဦး )
၃ ) ဧရာဝတီ မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၁၀ ( ဦးသိန်းဆွေ )
၄ ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအမှတ်(၃) ဒေါက်တာမြင့်နိုင်
၅ ) ရှမ်းပြည်နယ်အမှတ်(၃) (လားရှိုး-တန့်ယန်း-မိုင်းရယ်-သိန္ဒီ-ကွမ်းလုံ) ဦးစိုင်းမြင့်မောင် NLD ၃၃.၁% Lost to ဦးစိုင်းစံမင်း (ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) ၃၄.၂%
၆) စစ်ကိုင်း အမှတ် (၇) (ဗန်းမောက်၊ ကောလင်း၊ ၀န်းသို၊ ပင်လယ်ဘူး)( NLD ၀င်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်နိုင်ခြင်း မရှိ) ဦးတင်မြ (ပြည်ခိုင်ဖြိုး)
၁ ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ ၂ ( ဦးမျိုးခိုင် )
၂ ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရေကြည် ၂ ( ဒေါက်တာ လှမြတ်သွေး )
၄၅ နေရာ အနက် နေရာ ၄၃ နေရာကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ယခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ၄၄ နေရာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ၄၃ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ရာခိုင်နှုံးများမှာ ဂျင်မ်ရဲ့ လက်တော့ပ်ဖြင့် လက်ဆော့ချက်များ
သာ ဖြစ်ပါသည်။ ပယ်မဲများကို ထည့်၍ မတွက်ထားသောကြောင့် ပါတီချင်း အနိုင်ရရှိမှု ရာခိုင်နှုံး ဖြစ်ပါသည်။​ ရာခိုင်နှုံးများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် NLD ဧ။် အမာခံ မြို့နယ်များကို ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။)
04-01-2012 05:08 PM
ယှဉ်ပြိုင်ရာ ၄၄ နေရာလုံးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှအနိုင်ရရှိသွားကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကြေငြာချက်ကိုကိုးကားပြီး မ်ိဇ္ဈိမသတင်းဌာနကနောက်ဆုံးရသတင်းမှာဖြော်ပသွားပါတယ် ။ နေပြည်တော်ကအဆိုတော်ဇေယျာသော်အနိုင်ရတယ်လို့သိရတဲ့နောက်မှာ အခုလိုကြေငြာခဲ့တာပါ။ တချို့နေရာတွေမှာမဲရေတွက်နေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ NLD အမတ်လောင်းများကမဲအပြတ်အသတ်ရထားတာမို့ အခုလိုကြေငြာသွားတာပါ။ မဲစာရင်းအသေးစိတ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာကြေငြာမယ်လို့အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကဆိုပါတယ်။
tJ'Dvifhu rsufESmpmtkyfay:rSm ajymaewmawGUvkdU 'DrSm vmjyef &SJvfwmyg/
04-02-2012 02:41 AM
jrefrmh qufoG,fa&;u *sDtufpftrf rkdbkdif;pHepftwGuf puftopfawG wyfqifygawmhr,fwJhcifAsm..
ukd;um; - jrefrmhtvif; owif;pm (2.4. 2012 )
04-02-2012 04:10 AM
&efukef - aejynfawmf - rEÅav; tjrefvrf;rBuD;rSm vrf;t*Fg&yfESifh jynfhpkHnDnGwfrSK r&Sdao;aomfvnf; jynfolrsm; oGm;vmrSK vG,fultqifajyap&eftwGuf zGifhvSpfay;cJhjcif; jzpfygaMumif;
jynfxJa&;0efBuD;Xme jynfaxmifpk0efBuD; 'kwd,AkdvfcsKyfBuD; ukdukdu yxrtBudrftrsKd;om;vTwfawmf wwd, ykHrSeftpnf;ta0;&Jh ( 14 ) &ufajrmufaeYrSm &efukefwkdif;a'oBuD;rS ukd,fpm;vS,f a'gufwm jrwfÚmPpkd; wifoGif;wJhtqkdukd jyefvnf&Sif;vif;ajzMum;&mrSm 0efcHoGm;ygowJh/
a'gufwmjrwfÚmPpkd;u - &efukef - rEÅav; tjrefvrf;rBuD;wGif touftEÅ&m,f trsm;tjym; qkH;&SKH;onftxd ,mOfrawmfwqrSKrsm; jzpfyGm;aeygí ta&;ay: u,fq,fa&;,lepfrsm; pDrHxm;&Sday;&ef jynfaxmifpktpkd;&ukd wkdufwGef;aMumif;tqkd wifoGif;cJhwJhtcg yJcl;wkdif;rS OD;jrifhxGef;? &Srf;jynfe,frS OD;qkdifaygif;eyf eJY &efukefwkdif;rS OD;zkef;jrifhatmifwkdYu axmufcHaqG;aEG;cJhygw,fwJh.. tJ'DtcgrSm &efukef - rEÅav; tjrefvrf;rBuD;wpfavSsmuf wHwm;ae&mrsm;wGifom rD;tvif;a&mif&SdNyD; wjcm;ae&mrsm;wGif rD;tvif;a&mifr&SdonfhtwGuf um;rD;a&mifukdom tm;jyKoGm;vmae&aMumif;eJY ab;tEÅ&m,f uif;&Sif;a&; twGuf wifjywJhtqkdukd axmufcHaqG;aEG;cJhMuygw,f...
tjrefvrf;rBuD;onf uGefu&pfvrf;jzpfNyD; uwÅ&mxyfykd;vTm rcif;Ekdifao;onfhtwGuf ,mOfESifh wm,mukd xdckdufEkdifNyD; tEÅ&m,frsm;aomae&mrsm;wGif tumt&Hr&SdaomaMumifh jzwfoGm;jzwfvmrSKrsm; wd&dpämefvTwfausmif;rSKrsm;u ,mOfrawmfwqrSK tEÅ&m,f jzpfay:apEkdifaMumif;...
uGefu&pfvrf;jzpfonfhtwGuf jrefESKef;jrifht&Sdefjzifh ,mOfukd armif;ESif&mwGif ,mOfudk xdrf;odef;Ekdif&efcufcJNyD; um;wm,mukd xdckdufEkdifaMumif;... auGYaMumrsm; ckH;qif;ckH;wufrsm;wGifvnf; 'D*&DazmfaqmifxnfhoGif;&mwGif tm;enf;csufrsm;&SdNyD; uwÅ&mvrf;rsm;u ykdrkdtm;omcsuf&SdaMumif;.. ,mOfrawmfwqrSKjzpfyGm;onfh ae&mrsm;udk avhvmMunhfvSsif azmfjyyg tcsufrsm;udkawGY&aMumif;... pojzifh pojzifh ynm&SifawG&Jh okH;oyfcsufawGeJY aqG;aEG;MuygowJhcifAsm..
tJ'DtcgrSm jynfxJa&;0efBuD;Xme jynfaxmifpk0efBuD;u ajz&Sif;jznfhpGufaqG;aEG;wJhae&mrSm.. &efukef - aejynfawmf - rEÅav; ta0;ajy;vrf;rBuD;[m vrf;t*Fg&yfeJY jynfhpkHnDnGwfrSKr&Sdygbl;vkdY 0efcHajymMum; oGm;wmjzpfygw,f.. 'Dae&mrSm jynfxJa&;0efBuD;u bmjzpfvkdY tckvkd 0efcHw,fqkdwmuawmh odyfr&Sif; ygbl;... bmjzpfvkdYwkef;qkdawmh 'Dvrf;rBuD;eJY ywfoufvkdY wm0ef&SdwJhol[m jynfxJa&;0efBuD; r[kwfbJ aqmufvkyfa&;0efBuD; omjzpfoifhvkdYyg... 'ghtjyif jynfolrsm; oGm;vma&; vG,ful tqifajyap&ef zGifhvSpfay;cJhw,fvkdY qkdayr,fh vrf;t*Fg&yfeJY nDnGwfap&ef bmvkyfaew,f.. b,fvkdtpDtpOfawGeJY jyKjyifzkdY pDrHxm;w,fqkdwmukddawmh &Sif;vif;wifjywJhtxJrSm yg&Sd[efrwlyg... 'ghtjyif EkdifiHwum tpkd;&awG 0efBuD;XmetqifhawGwifru uefx&kduf&,lNyD; aqmufvkyfa&; vkyfief;vkyfukdifwJh ukrÜPDawG rvGJraoG xnfhoGif; pOf;pm;wGufcsufNyD; wm0ef,l&wJh tykdif;jzpfwJh ab;tEÅ&m,f uif;&Sif;rSK? vkHNcKHpdwfcs&rSK qkdwJh ta&;tBuD;qkH;tcsufxuf oGm;vmrSK vG,fultqifajyapa&;qkdwJh tcsufukd OD;pm;ay;wifjyxm;wJhtay: vTwfawmfukd,fpm;vS,frsm;zufu jyefvSefar;cGef;xkwfrSK &Sdr&Sdqkdwmukdvnf; &Sif;&Sif;vif;vif; rod&Sd&yg...
tqkdyg tjrefvrf;rBuD;\_ &efukef - aejynfawmf vrf;ykdif;udk 2009 ckESpf rwfv 26 &ufaeYrSm wyfrawmfaeYukd *kPfjyKzGifhvSpfcJhwmjzpfNyD; usef aejynfawmf - rEÅkav; vrf;ykdif;ukdawmh 2011 ckESpf 'DZifbmv 23 &ufaeYrSmrS w&m;0if zGifhvSpfcJhwmjzpfygw,f... vrf;pwifzGifhvSpfcsdefupvkdY okH;ESpfwm umvtwGif; ,mOfrawmfwqrSK 290 rSK? aoqkH;ol 147 OD;? 'Pf&m& &Sdol 618 OD; &Sdw,fvkdY w&m;0if rSwfwrf;awG&Jh udef;*Pef;awGu azmfjyMuygw,f..
tudk;tum; - aMu;rkHowif;pm (2.4. 2012 ) pmrsufESm 2
04-02-2012 04:44 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွှေဂုံတိုင်ရုံးချုပ်သို့ ဧပြီလ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရောက်ရှိပြီး လူထုသို့ စကားပြောသွားမည်ဟု သိရသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွှေဂုံတိုင်ရုံးချုပ်တွင် ပါတီဝင်များနှင့် ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်များ ၂၀၀ ကျော်ခန့် ရောက်ရှိနေကြောင်းသိရသည်။
ယနေ့နံနက် ၁၁နာရီ ၃ မိနစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လူထုကို စတင်မိန့်ခွန်းပြောကြားနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
2 &ufae hp&rSmudk 1 &ufae heJ hrSm;&dkufxm;vdk hjyefjyifxm;ygw,f
udk eggplant a& wpfjrdK he,frSmbJ A B C tukef&dSygw,f
04-02-2012 05:30 AM